Google AdWords ပေါ်လစီ - ထိုစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပါ။
စနေနေ့, ဧပြီ 30, 2011 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2017 ခရစ် Bross
အယ်ဒီတာအဖွဲ့သို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုများအတွက်သင်၏စာသားကြော်ငြာများကိုသဘောမတူပါလား။ အကယ်၍ သင်ကအရာရာတိုင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ခဲ့လျှင်သင်ဘာကြောင့်ဂူဂဲလ်ကိုဘာကြောင့်အော်ရတာလဲ။
AdWords သည်သင့်အားချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်စာသားကြော်ငြာများစွာလည်းရှိသည်။ သူတို့ရဲ့မူဝါဒကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့စာသားကြော်ငြာကိုသူတို့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မယ့် algorithms တွေရှိပါတယ် အဆိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတကယ်တော့ပြီးနောက်အဘယ်ကြောင့်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်သိပ်မနှင့်အတူအမြဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်စိတ်ပျက်စရာ!
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင် LPQ-Support@Google.com မှရင်းနှီးသောအီးမေးလ်ကိုဘာသာရပ်လိုင်းနှင့်ရရှိမယ်။ သင်၏ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာအကောင့်တွင်ချိုးဖောက်မှုများစွာရှိသည်! ဤအီးမေးလ်ကိုလျစ်လျူမရှုပါနှင့်၊ အကယ်၍ ချိုးဖောက်မှုဆက်ရှိနေပါက AdWords သည်သင်၏အကောင့်ကိုပိတ်လိမ့်မည်။ ဒီဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနှင့်အချိန်အကုန်ခံခြင်းအားဖြင့်ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာများကိုကောင်းစွာနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
At အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်တို့ AdWords ပေါ်လစီကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် Googler ဟောင်းများကိုစူပါစတားအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။ PPC ကျွမ်းကျင်သူများအားလုံးအတွက်စိတ်ကိုထိပ်ဆုံးထားသင့်သည့်အကြံပြုချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
AdWords သည်ကမ္ဘာအနှံ့နှင့်နိုင်ငံအလိုက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပေါ်လစီများအရကမ်းလှမ်းသောကြော်ငြာအမျိုးအစားအားလုံးကိုထိန်းချုပ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၏အရှိန်အဟုန်နှင့်အမီလိုက်ရန်မူဝါဒသည်မကြာခဏပြောင်းလဲတတ်သည့်အချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်သစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသောကမ္ဘာတွင်သင်သည်သင်၏ browser တွင် scrolling alert system ကိုတပ်ဆင်ထားလျှင်၎င်းတို့ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါပေါ်လစီအပြောင်းအလဲများကိုသတိပြုမိစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါလား။ ခန့်မှန်းကြည့်ပါ - Google မှာအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါကိုခေါ်ပါတယ် မူဝါဒပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်းသင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသေးပါကကျွန်ုပ်သည် bookmark ထည့်ရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
၎င်းသည်ကြော်ငြာပေါ်လစီအပြောင်းအလဲများကိုသူတို့ပေါ်ပေါက်လာသည်သို့မဟုတ်စာရင်းမတင်မီအနည်းငယ်တွင်ပင်စာရင်းပြုစုသောစာမျက်နှာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးရန်အလေ့အကျင့်တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ AdWords ပေါ်လစီတွင်မမျှော်လင့်သောပြောင်းလဲမှုများကြောင့်သင်ကွေးနေသောရှေ့ကို ဆက်၍ ကြော်ငြာများမဆင်းနိုင်အောင်တားဆီးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ PPC ဂိမ်းအစီအစဉ်သို့အချက်မူဝါဒမူဝါဒပြIssနာများ
သင်သည် PPC အကောင့်တိုးတက်မှုများပြုလုပ်နေပါကသင်၏ကြော်ငြာများအားလုံးကိုအလဟ and မကုန်ဘဲအသစ်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးမထားသင့်ပါ။
ဤအရာကိုနားလည်ခြင်းအပြင်ကြော်ငြာများစွာသည်ပြေးရန်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ကိုသင်၏ကြော်ငြာအသစ်များမဖွင့်မှီ၊ (ကြော်ငြာများကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသို့မဟုတ်သဘောမတူခြင်း) အချိန်ကျနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်သင့်သည်။ သူတို့ရဲ့အပြည့်အဝအလားအလာရန်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကြော်ငြာအားလုံးအားမရပ်တန့်လိုပါကသင်လုပ်သင့်သောအရာသည်လုပ်ရန်ဖြစ်သည် သင်၏အကောင့်“ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း” ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းသင်၏လက်ရှိကြော်ငြာအနည်းငယ်ကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။
PPC အကောင့်မန်နေဂျာကနွေ ဦး ရာသီအကုန်လုံးသန့်ရှင်းအောင်လုပ်သည့်အခါအလွန်အမင်းရိုးရှင်းသော်ငြားလည်းပြင်ဆင်မှုတစ်ခုလုံး၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်အတားအဆီးများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သည်။
ယူအက်စ်တွင် AdWords ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်လစီနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပြုရမည့်အချက်မှာ၎င်းသည်ထိုအရာဖြစ်သည် ကြော်ငြာစာသားကိုသာအုပ်ချုပ်သည်၊ သော့ချက်စာလုံးများကိုမထိခိုက်ပါ။ သူတို့မကြာခဏဖော်ပြသည့်အတိုင်းဂူးဂဲလ်သည်ကြော်ငြာရှင်များကိုသူတို့၏သော့ချက်စာလုံးများရွေးချယ်ရာတွင်လွတ်လပ်မှုများများရရန်ခွင့်ပြုလိုသည်၊ အမေရိကန်၌လည်းသူတို့သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အသုံးအနှုန်းများကိုသော့ချက်စာလုံးများဖြင့်စောင့်ကြည့်မည်မဟုတ်ချေ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သက်တမ်းကို Google ရှာဖွေရေးဘားထဲသို့ထည့်သောအခါပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ၏ကြော်ငြာပေါ်လာသည်ကိုစိတ်ဆိုးလျှင်သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်။
နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုကတော့ဂူဂဲလ်ကကြော်ငြာစာသားထဲမှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုဘယ်လိုစောင့်ကြည့်မလဲဆိုတာပါပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သက်တမ်းကိုဂူဂဲလ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးမဟုတ်ပါက၎င်းကိုစောင့်ကြည့်ရန်တောင်းဆိုခြင်းမရှိပါကသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုစောင့်ကြည့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကာလ! ကျွန်ုပ်သည်အရင်းအမြစ်များအကန့်အသတ်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောကြောင့်ဂူးဂဲလ်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သတ်မှတ်ချက်များကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်ဖိုင်မှတ်တမ်းကိုရှာဖွေခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်သင်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန် TM တိုင်ကြားချက်ကိုတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုကျန်ရှိနေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ AdWord ပေါ်လစီကိုသေချာအောင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာနည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးပြီးသူ့ကိုယ်ပိုင် post ကိုခံထိုက်တယ်။
Tags: AdWords အ googleဂူဂဲလ် adwords မူဝါဒCP တိုင်းတာပါ
Search Engine များစောင့်ရှောက်မှုပေးသလား။
18:2011 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 14
ကိုယ့်ဒီနံနက်ဤဆောင်းပါးကိုဖြတ်ပြီးပွေးလေ၏။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဂူဂဲလ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေချင်ပါသည်။ မည်သူမဆိုဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်မျိုးရှိခဲ့လျင်ကြားလိုသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ယခုအလုပ်သစ်တွင် ၂ ပတ် (အချိန်မပြည့်မှီ ၂ လတာအချိန်ပြည့်) အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကဂူဂဲလ်မှ“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး” အဆင့်ကိုရရှိခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေသည့်အချိန်အတွက်သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်လစီများအကြောင်းကိုအားထုတ်ပြီးနောက်၊ ငါကြော်ငြာအသစ်များကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုမှာသိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပဲအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သောအခြားကြော်ငြာများထက်ပိုသည်။ ငါအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပြီးအခြားသူတွေ ok'd နေစဉ်ဒီကြော်ငြာတွေဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။
သငျသညျသော့ချက်စာလုံးများနှင့်ပတ်သက်။ သင်မှတ်ချက်ပေးသကဲ့သို့, ငါနားလည်သောသော့ချက်စာလုံးတွေကြော်ငြာစာသားကနေသီးခြားပြissueနာဖြစ်ကြောင်း။ ကျွန်ုပ်၏မေးမြန်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဂူးဂဲလ်မှကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ဤကြော်ငြာအုပ်စုများရှိသော့ချက်စာလုံးအချို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်။
ငါဤခေါင်းစဉ်အပေါ်ရှင်းလင်းချက်တောင်းရန်နောက်တဖန်စာရေးခဲ့ကြခြင်းနှင့်သူတို့သည်အနာဂတ်၌ပြproblemနာကိုရှောင်ရှားရန်ငါကူညီနိုင်ငါဖတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်သလား, သူတို့ကအကူအညီမကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ရှာဖွေရေးအသံအနိမ့်အမြင့်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ခေတ္တရပ်တန့်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ကြားခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်?
ဧပြီ 18, 2012 မှာ 1: 34 pm တွင်
ကျွန်ုပ်၏ Google Adwords အကောင့်သည်တစ်နှစ်လောက်မလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ $ 10 ကိုငါ့ adwords account ထဲအပ်လိုက်ပြီးငါ့ website အသစ်အတွက်ကြော်ငြာတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ Google ကကျွန်ုပ်အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်သည်။ ငါသူတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးသူတို့ဘာကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားတာလဲလို့မေးတယ်။ သူတို့ကဘာလို့ပြန်ပို့တာလဲ၊ ပြန်မပို့နိုင်ဘူးလို့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတယ်။ ငါသည်သူတို့၏ကြော်ငြာမူဝါဒများစသည်တို့ကိုဖတ်, ငါ့ကြော်ငြာသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူဘာမှမတွေ့မြင် ကြော်ငြာကကျွန်ုပ်ရောင်းသည့်စာမျက်နှာနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်မာများတီထွင်ရန်အကောင်ရေတစ်သောင်းကုန်ကျသောရိုးသားသည့်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်ရောင်းသည်။ ဒီတစ်ခါလည်း Google Adwords ကလူတွေကိုအရောင်းစာမျက်နှာကိုချိတ်ဆက်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလား ကျွန်တော်ဒီဟာကိုမသိနိုင်ပါဘူး ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းကိုကြော်ငြာတွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူများသာ link ကိုနှိပ်ပါ။ ကြော်ငြာထဲမှစျေးနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားသလား။ ဒါကတွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေရှုပ်ထွေးနေသည်။ ငါအကောင့်ဖျက်သိမ်း $ 10 ဆုံးရှုံးနှင့်အသစ်တစ်ခုအကောင့်နှင့်အတူစတင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သို့သော်စည်းကမ်းချက်များအရ အကယ်၍ အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားပါကကျွန်ုပ်ဖန်တီးထားသောအခြားအကောင့်အသစ်များကိုအစဉ်အမြဲဆိုင်းငံ့ထားလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သူတို့နှင့်လည်းကျွန်ုပ်မကြော်ငြာတော့ပါ။ ဒါကအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်။
မတ်လ 27, 2014 မှာ 10: 20 AM
သင့်အနေဖြင့်ပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာမိတ္တူနှင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ၁၀၀% မှန်ပါသည် - ကျွန်ုပ်တို့တွင်မော်တော်ကားတာယာများ၊ အနံများစီးဆင်းသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူထားသူတစ် ဦး ရှိသည်။ အများအားဖြင့်သူတို့အတွက်တိကျသောအချင်းဝက်နှင့်ဘီးအကျယ်အရွယ်အစားများက စုပေါင်း၍ ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နေသည်။ မင်းကိုမင်းရဲ့အကောင့်ကိုကြည့်ချင်ရင်မင်းအကြံဥာဏ်တချို့ပေးရင်ငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ simon.b@resultsdriven.org။ သို့မဟုတ်သင်ဖုန်း ၃၀၂-၄၀၁-၄၄၇၈ ကိုနှစ်သက်ပါကအမြန်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုစီစဉ်နိုင်သည်။